मिर्मिरे – Nepali Profile
२ फाल्गुन २०७७, 9:15 am
प्रिय मनहरु ! जर्ज स्याण्डले भनेका छन्,”संसारमा एक मात्र खुशी छ- माया गर्नु र माया पाउनु !” प्रत्येक मानिस जीवनमा सफलता चाहन्छ, उसको एक मात्र ध्येय यो हुन्छ कि उ सुखी होस् । तर यथार्थ…
बेग रानाकाे ‘लाैरी टेकेकाे’ बजारमा …
७ मङ्सिर २०७७, 9:57 pm
१८ असोज २०७७, 4:53 pm
३४ वर्षिय सना मरिन फिनल्याण्डको प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा नेपाली बजारमा चर्चाको विषय थियो–विद्यार्थी संगठनमा ३२ वर्षे उमेर हदबन्दी । ‘युवा र नेपाली राजनीति’ मा प्रत्येक वर्ष ज्वलन्त रुपमा उठ्ने र बहश हुने विषय हो ।…
३ भाद्र २०७७, 8:12 am
बा ! जब म सानो थिएँ । मेरा बा’ कामको शिलशिलामा कतै जानुहुन्थ्यो । अनि म बालाई रातिसम्म कुर्ने गर्थेँ । म जान्दिन थिएँ बा’को काम बन्थ्यो या बन्दैन थियो । तर, मलाई देखेपछि बा’…
२५ साउन २०७७, 9:40 am
लगभग बिहानको ७ बज्दै थियो । आँखा खुल्नासाथ नजर छेउमै रहेको मोवाइलमा पुग्यो । म्यासेन्जर के खोल्न भ्याएको थिएँ, म्यासेजको घन्टी वर्षाको झरी झै बर्सियो । झट्टै म्यासेजहरु हेरेँ । जुलाई ३०, अर्थात अन्तराष्ट्रिय मित्रता…
‘… अनि सँगै कोरोना ल्यायो भने के गर्ने ?’
१३ साउन २०७७, 12:34 pm
अहिले हामी असामान्य अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं । हामी मात्रै होइन महाशक्ति ठानिएका पनि । विज्ञान र प्रविधिले भरिपूर्ण मुलुकहरु पनि कोभिड–१९ को प्रभावबाट अछुतो रहन सकेनन् । तथ्याङ्क हेर्दा कोभिड–१९ ले सबै भन्दा बढी आक्रान्त…